नगर बसमा महिला कन्डक्टर ! मेयर भन्छन्,–‘दिदी बहिनीलाई चलिआएकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ’ - Arthapage
नगर बसमा महिला कन्डक्टर ! मेयर भन्छन्,–‘दिदी बहिनीलाई चलिआएकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ’
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको नगर बस अबका केही दिनमै सडकमा गुड्ने छन् । बाँकेका बिभिन्न ‘रुट’ मा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । स्थानीय तह आफैले बस सञ्चालन गर्न लागेको सम्भवत नयाँ हो । त्यसमा पनि अझ सञ्चालनमा आउन लागेको बसमा परिचालक ‘कन्डक्टर’ महिला हुने छन् ।
काठमाण्डौंका चल्ने सवारीसाधनमा महिला चालक र परिचालक देखिन्छन् । त्यसबाहेक मोफसलमा सम्भवत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यो काम शुरु गर्दै हो । मेयर डा. धवल शमसेर राणा भन्छन्,–‘हाम्रा दिदी बहिनी कहाँ कम छन् र ? जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाउनका लागि यो काम शुरु गर्दै छौं ।’ महिला सशक्तिकरणका उक्त काम उदाहरणिय हुने मेयर राणाको बुझाई छ । महिलाले घरको चुल्हो चौकाको काम सिमित हुनुपर्छ भन्ने कहि नलेखेको बताए ।
नेपालगञ्जका मेयर डा. धवल शमसेर राणा ।
उपमहानगरपालिकाले सातवटा नगरबस खरिद गरेको छ । यि बसमा परिचालक मात्र होइन चालक नै महिला राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि २५ जना महिलालाई निःशुल्क तालिम समेत दियो । तर अझै तयार बनाउन समेत लाग्ने भएकाले तत्काललाई परिचालक मात्र राख्न लागिएको हो । मेयर राणा भन्छन्,–‘अहिले परिचालक नै पछि गएर चालक बन्न सक्छन् । उहाँहरु परफेक्ट भए पछि बिस्तारै चालक, परिचालक नै महिला राख्ने हो ।’ उपमहानगरले परिचालकका लागि आवेदन माग गरी अन्र्तवार्ताको तयारी गरिरहेको छ । मधेसी, मुस्लिम, जनजाती महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मेयर राणाले कुनै बेला आफ्नो गाडीको चालकमा महिला राखेका थिए । त्यसबेला महिलाले गाडी चलाएको देख्दा अनौठो मानिन्थ्यो । मेयर राणा भन्छन्,–‘महिला ती बहिनी आईएनजिओमा चालक छन् ।’ मेयर राणाले महिलालाई अवसर दिने हो भने जस्तो पनि काम गर्न सक्ने बताए ।
प्रकाशित मितिः 8:50:06 AM |
Prevसहकारी वित्तीय विकास संस्था अपचलन प्रकरण : छानविन समितिको काम स्थगित
Nextउद्योगी/व्यवसायीलाई मानवअधिकार बारे प्रशिक्षण, ‘जान्नै पर्ने बिषय हो’– किशोर प्रधान